MAHAFINY Dassault Mystère IV A FSX
Fa ny modely mifanaraka amin'ny FS2004 kitiho eto
Faran'izay miteraka sy avo lenta, ny zavatra rehetra dia tafiditra: feo virtoaly cockpit sy modely.
Aza adino ny mamaky ny mpampiasa boky amin'ny teny Frantsay. Ahitana 9 repaints. Ny Dassault Mystère IV dia 1950s frantsay fiaramanidina mpiady-baomba, voalohany transonic fiaramanidina hiditra fanompoana frantsay Air Force.
Ny Mystère IV i mino ny evolisiona fampandrosoana ny Mystère II fiaramanidina. Na dia nitondra ny ivelany mitovy ny teo aloha fiaramanidina, ny Mystère IV raha ny marina dia endrika vaovao amin'ny fanatsarana ny supersonic aerodynamic sidina. Ny nitranga fahiny nanidina voalohany tamin'ny Septambra 28 1952, ary ny fiaramanidina fanompoana niditra tamin'ny Aprily 1953. Ny voalohany Mystere 50 IVA famokarana fiaramanidina dia Powered by Rolls-Royce Britanika Tay turbojets, raha ny sisa nanana ny Frantsay-nanorina an'i espaniola sy Suiza Verdon 350 dikan izany maotera.
Frantsay Mystère IV amin'ny Bitburg Rehefa Air Base (Germany), tany am-boalohany 1960s
Israeliana Mystère IVs nahita asa nandritra ny Arabo-Isiraeliana Ady ka nanatevin-daharana ny frantsay Mystères ho an'ny krizy ny Suez. Tamin'ny Jona 8 1967, Israeliana fiaramanidina nandray anjara tao amin'ny loza sy mampiady hevitra fanafihana USS Liberty.
India nahatonga 104 ireo amin'ny fiaramanidina mandritra ny 1957. Dia nampiasaina be dia be tao amin'ny Indo-Pakistaney Ady ny 1965. Tamin'ny Septambra 7 1965, ambany fiadidiako, Mpitarika Ajjamada Devayya ny Indiana Air Force nitifitra teo ny F-104 Starfighter nandidian'i Flight Lieutenant Amjad Khan ao amin'ny Pakistan Air Force in nanafika ny Sargoda. Amjad nahavita baolina maro Hits amin'ny Devayya ny Mystère ka nino azy mba ho ringana, ka nanapaka mba hitady hafa lasibatra. Na izany aza, ny Mystère Devayya mbola operable, ary soa aman-tsara ny Starfigher nitifitra teo. Devayya novonoina na nianjera tsy ela rehefa afaka. Izany ady dia voamariky any India mandra-dia nambara ao amin'ny John tatỳ aoriana Fricker ny boky Ady for Pakistan. Devayya no nahazo ny Maha vir Chakra taorian'ny nahafatesany 23 taona taorian'ny ady.
Ny phasing avy amin'ny fiaramanidina nanomboka ela taorian'ny 1965 Indo-Pakistaney Ady, fa nahita asa bebe kokoa ao amin'ny Indo-Pakistaney Ady ny 1971. Dia tanteraka phased avy amin'ny Indiana Air Force amin'ny 1973.
Downloads 14 367